avylavitra · Jona 2010 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Jona, 2010
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Jona, 2010
Malaizia: Rava ny fonja manan-tantara
Azia Atsinanana 29 Jona 2010
Any Korea Atsimo, saiky isanandro vaky ny ady seza mitranga any amin’ny metro eo amin’ireo tsy mitovy vanimpotoana niainana. Ny filàm-baniny mihatra amam-batana na atao amin’ny vava mikasika io resaka seza malaza io no taterina anat aterineto ary be hafatra vaovao mitaraina noho ny fihetsika mihantsy asehon’ireo zokiolona any anaty metro hita mipariaka any anaty tranonkala.
Tontolo: Miaro ny Zon'Olombelona amin'ny alàlan'ny videon'olon-tsotra
Azia Atsinanana 28 Jona 2010
Ny famokarana video ho fiarovana ny zon'olombelona dia mety hifototra sy tahotra hanohina ny zony any amparany ho an'ireo olona miseho na mandray anjara amin'ilay video. WITNESS' The Hub dia mizara amintsika ny fomba ahazoantsika mamokatra video fiarovana ny zon'olombelona ampitàna hafatra no sady manakely ny mety ho fiantraikany amin'ireo rehetra tafiditra amin'izany.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 28 Jona 2010
China: Fanentanana ny mba hampiasàna ny tena anarana eo anivon'ny aterineto
Shina 20 Jona 2010
Ho an'ny maro amin'ny mafana fo amin'ny fampielezam-baovao, ny fametrahana ny tena anarana eo anivon'ny aterineto dia fanitsakitsahana ny fiainana manokana, kanefa, ao China, misy sasantsasany amin'ireo olon-tsotra mafana fo no manentana ny hametrahana ny tena anaran'ny tena amin'izay rehetra atao eo anivon'ny aterineto mba hioharana ny tahotra. Tamin'ny volana...
Sina: Mpi-tweet maromaro nanjavona talohan'ny 4 Jona
Shina 07 Jona 2010
Sinoa mpi-tweet maromaro no voasambotra sy voatana amponja hatramin'ny fiandohan'ny Jona tany – volana iray saro-pady noho ny fitsingerenan'ny datin'ny 4 Jona. Araka ny voalazan'i @tengbiao, mafana fo iray mpiaro ny zon'olombelona mipetraka any Beijing, dia enina raha kely indrindra ny mpi-tweet voasambotra hatramin'ny 1 Jona 2010. Dia ry @suyutong,...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 03 Jona 2010